Eegdoota warraaqsa Oromiyaa (EWO), Caamsaa 22, 2020 – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooEegdoota warraaqsa Oromiyaa (EWO), Caamsaa 22, 2020
#Gimbii. Caamsaa 22, 2020.
Waraanni Humna Addaa Oromiyaa Mooraa Diinaa Keessaa badaa jiru.Guyyaa kaleessaa Waraanni humna addaa Oromiyaa waamicha taassisaafii jirru awwaachuun nama 16 tahaanii dambidoolloo irraa osoo badaa jiranii namoonni lama Magaalaa Gimbii keessatti qabamuun harka mootummaa gabroomfataa buhanii jiran. Waan nama ajaahibu odeessa argataniin hordofanii akka qaban qaamni nu waliin dalagu ka waraana PP keessa jiru gabaasee jira. Kanumaanis intalli tokko ka maqaanshee dhaahamuun ammatti hin barbaachisnes humna addaa Oromiyaa warra osoo badaa jiruu qabame faana qabamtee jirti.
Bakki itti qabaman: Magaalaa Gimbii.
Bakki amma jiran: Waajjira ganda 02.
Baayyina: Miseensa Waraanaa humna addaa Poolisii Oromiyaa lamaafi shamarree civil’ tokko. Walitti nama sadii.
Guyyaa itti qabaman: Caamsaa 21, 2020.
Ammalleen Waraanni humna addaa Oromiyaa hedduun isaanii mooraa diinaa diiguun gariin gara maatii gariin ammoo ka badaa jiran hedduudha.
Mooraa diinaa diiguun itti fufa.
Ilmaan Oromoo Fi Kanneen Lammiilee Oromiyaa Tahan Waraana RIB keessa Jiran Haala Paartiin Bilxiginnaa/PPn Oromiyaa Keessatti Raawwatamu Balaaleffatanii Jiru.
Waraana RIB keessaa kanneen Sabaan Oromoo tahanii fi kanneen lammiilee Oromiyaa tahan akkasumasa Saba isaaniif quuqama qaban taatee guutummaa Oromiyaa keessatti gartuu paartii bilxiginnaa/pp jettee of yaamtuun raawwatamaa jiru balaaleffatchuun Ummata isaanii bira akka dhaab batan ibsatanii jiru.
Haaluma kanaan humnootni kunneen iccitiin wal mari’achuudhaan akka gara miidhaa Ummataaf waariyyaa tahan ibsachuun kutaalee waraana biyyattii keessaa icciiidhaan mariin godhamu itti fufee jiraatchuu dubbatu. Miseensootni RIB kunneen erga dhiibbaan qaama mootummaa ofiin jedhuun Ummatarratti geggeeffamuu egalee kaasee caasaa iaaanii bal’inaan dirirfatchaa akka turan yaadachiisuun Ummata keenyaaf lubbuu tokkittii qabnu wareegna malee roorroo saba keenyaa callisnee hin ilaallu jechuun ejjennoo qaban ibsatan.
Mootummaa kufee fi dhagaa mukatti rarra’ee of dandamachisuuf dhidhiitatu kufaatii isaa shaffisiisa malee warraaqsa Ummataa irra aanuu waan hin dandeenyeef nutis Ummata waliin dhaabbannee gahee nurraa eegamu akka bahatnuu fi haala jiru maraan saba keessaa dhalatne bira dhaabbatnu irratti waliif galuu keenya beeksisna jechuun yaada isaanii guduunfu.
Gafaan Gadaa Xumura Garbummaati!